Fanoroana:Ahoana ny manao takelaka - Wikipedia
Fanoroana:Ahoana ny manao takelaka
Ny tanjon'ity pejy ity dia manoro anao hoe ahoana ny manova ny lahatsoratra eto amin'ny wikipedia.
Afaka manova takelaka avy hatrany daholo ny mpikambana sy ny mpitsidika rehetra eto amin'ny wikipedia, ary tsy mila manoratra anarana ato akory vao afaka. Ampahazotoinay manoratra eto ianao raha hitondra zava-tsoa (takelaka tsara « au top ») eto amin'ity wikipedia ity.
Mandehana any amin'ny bistro rehefa manana fanontaniana manokana, na manorata any amin'ny mpandrindra eto amin'ny wikipedia.
Ahoana no manova takelaka(d)[hanova | hanova ny fango]
Afaka ovain'ny mpampiasa aterineto avy hatrany ny ankabiazan'ny pejy eto amin'ny wikipedia, ary io kosa ny foto-pandehanany. Azon'ny mpitsidika ovaina ny pejy raha hanatsara azy ny tena tanjony. Afaka ampiasaina ny Kianjam-pasika rehefa manandrana ny syntaxe wiki ; Azo ampiasaina ihany koa ny pejinao raha tianao.
Ovay ny lahatsoratra misy ao anatin'ilay pejy[hanova | hanova ny fango]
Afaka manindry ny rohy [ ovay ] eo amin'ny fizaràna (section) koa ianao rehefa fizaràna iray ihany ny tianao ovaina.
Ataovy ao daholo ny fanovàna tianao atao. Azonao atao ny manova ny lahatsoratra misy ao amin'ilay fizaràna : Mitsara ny zava-diso, manampy/mamafa lahatsoratra sns. Hitanao fa misy soratra ohatra ny , ', [[ na ]]. Io ny syntaxe wikipedia, io no manome endrika ny lahatsoratrao.
Hitanao eo ambon'ny toerana anoratana fa misy barre d'outils manamora ary mampahaingan'ny asa tsotra : Soratra matavy, Sora-mandry, rohy lohateny sns.
↑ Tsy afaka ovaina ny pejy manokana sy ny pejy voaaro satria sarobidy na be mpanimba
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanoroana:Ahoana_ny_manao_takelaka&oldid=815453"
Voaova farany tamin'ny 14 Mey 2018 amin'ny 07:19 ity pejy ity.